Qodobada Go,aanka Taariikhiga Ah Ee Golaha Fulinta ee Soomaali-State. – Xeernews24
Qodobada Go,aanka Taariikhiga Ah Ee Golaha Fulinta ee Soomaali-State.
3. Mai 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
1) DDS waxaa ka go’an inay si buuxda u dhaqangaliso dastuurka Dalka. Wareejintii dhulka ay maamuladii hore sida jujuubka ah ugu wareejiyay iyadoo ay riixayaan kootara baandhinteyaal iyo tuug qawlaysata ah lana baal maray dastuurka iyo shuruucda dalka, islamarkaana aysan jirin meel iyadoon la tixgalinayn rabitaanka shacabka in maamul dhiig miirato ah uu masiirka ummada kursi siisto.
2) Xukuumada Degaanka Canfartu waxay ku guul daraystay inay sugaan xuquuqda iyo amniga shacabka Soomaaliyeed ee sida sharci darada loogu wareejiyay.
3) Laga bilaabo maanta oo ay taariikhda Itoobiya tahay 25/08/2011 (tirsiga Itoobya)Xukuumada DDS waxay ka noqotay heshiiskii xaaraanta ahaa ee (Cabdi Ileey) ee dhulka sida dastuurka aan waafaqsanayn uu ugu wareejiyay Canfarta.
4) Iyadoo lala kaashanayo hay’adaha amniga ee federaalka waxaa masuuliyad ka saaran tahay sugida amniga shacabka Soomaalida ee ku dhaqan magaalooyinka Garba Ciise, Cundhufo iyo Cadaytu, wuxuuna goluhu go,aamiyay in ciidanka amaanka deegaanku gaadho lana wareego amaanka goobahaasi.
5) Iyadoo lala kaashanyo hay’adaha Samafalka iyo Federsalka in gargaar bini aadminimo oo degdeg ah lala gaadho shacabka.
6) Dawlada Deganka Canfartu waa inay si degdeg ah u sii daysaa shaqaalaha biniaadmino ee save the children, odayaasha, aqoonyahanka ito hooyooyinka sida sharci darada ugu xidhan.
7) Iyadoo lala kaashanayo hay“adaha sharciga ee fedraalka waa in sharciga la horkeeno dhamaan cidii ka danbaysay dilkii, barakicintii iyo xasuuqii shalay.
8) In la ilaaliyo amniga shacabka Soomaalida.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/deg-deg.png 164 307 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-05-03 16:50:182019-05-03 17:35:05Qodobada Go,aanka Taariikhiga Ah Ee Golaha Fulinta ee Soomaali-State.
Aaway Liyuu Booliskii Soomaali-State ee Soomaalidda uu Xoogga badnaa? Waddankeenna Waxaa ka Jira Kun Maadays!